Ichimoku Kinko Hyo, वा Ichimoku सूचक - मानक वितरण, केही मा समावेश गरिएको छ जो एक छ व्यापार मञ्चहरूमा। यो मुद्रा बजार को "विदेशी मुद्रा" विश्लेषण गर्न प्राविधिक संकेतक को कोटीमा पर्छ। टर्मिनलमा वितरण को अभाव मा सजिलै इन्टरनेट बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। व्यापार साधन सार्वजनिक डोमेन मा प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यक्रम को विकासकर्ता जापान Goichi Hosoda देखि एक व्यापारी हो। 30 का मा डिजाइन, Ichimoku सूचक मूल लामो अवधि मा स्टक बजार मा व्यापार को लागि छाँटकाँट थियो। यो फाइदा लामो अवधि लागि साझा लगानी गर्न लगानीकर्ताले दिइएको थियो भन्ने तथ्यलाई कारण छ। सूचक पनि मार्केटिङ वर्षैभरि बजार आन्दोलनहरु विश्लेषण। विश्लेषण गर्न प्रयोग र जापान मा शेयर बजार पूर्वानुमान सूचक। एक समय पछि Ichimoku प्रणाली अन्तर्गत पुनर्निर्माण मुद्रा बजार र हप्तामा, तर पनि दैनिक चार्ट मा मात्र राम्रो व्यापार परिणामहरू देखाउन थाले।
Ichimoku सूचक बजार विश्लेषण लागि धेरै विकल्प जोडती। यो रुझान (समर्थन र प्रतिरोध, समावेशी रेखाहरूको संग) निर्धारण गर्न प्रयोग भएको छ। यो संकेत उत्पन्न संग विभिन्न व्यापार साधन किन्न र बेच्न। कार्यक्रम को एक सुविधा नेत्रहीन को व्यापारी बजार को स्थिति बारे जानकारी कुराकानी गर्न आफ्नो अद्वितीय क्षमता छ। कार्यक्रम को कार्यक्षमता तपाईं रेखा र बादल को रंग परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। प्रत्येक व्यापारी रंग योजना तिनीहरूलाई देख्न लागि सजिलो हुनेछ चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रौद्योगिकी विश्लेषण उपकरण को संरचना
तीन समय अन्तरालहरू समय मा भिन्न मा कार्यक्रम आधारित छ: औसत मूल्य मान आधारित छन् जो 9, 26 र 52. लाइनहरु, हामीलाई बजार विश्लेषकहरूले लागि सबैभन्दा सही संयन्त्र विकास गर्न दिनुभयो। वितरण यस्तो औसत चलायमान रूपमा एक उपकरण संग एक निश्चित समानता छ। मतभेद मात्र स्थापित मापदण्डहरु छन्। को सार्दा औसत को Ichimoku सिस्टम को गणित औसत मूल्य मूल्य प्रयोग हुँदा मूल्य सीमा को केन्द्रीय तथ्याङ्कले आधारित छ। यो सम्भव मूल्य तालिका को ठंड सूचक को समस्या को समाप्त गर्न बनाउँछ।
Ichimoku रेखाहरू सम्पूर्ण वितरण को ढाड हो। बताइएझैं तिनीहरूले विभिन्न समय अवधिमा आधारित छन्। रंग योजना निर्माण गर्ने पाँच लाइनको। विभिन्न रंग मा रंग को जोडी को दुई रेखाहरू बीच क्षेत्र। ग्रिडको मूल्य आन्दोलनहरु को ग्राफ मा superimposed छ।
सूचक प्रतीक सापेक्षित पट्टी को स्थान को आधार मा सञ्चालन विस्तृत बजार विश्लेषण।
Tenkan-सेन - सूचक को पूर्वनिर्धारित सेटिङ छ जो प्रवृत्ति रेखा को एक सहनुपरेको, मूल्य चार्ट मा रातो प्रतिबिम्बित गरिएको छ। लाइन छोटो-बस्ने (छोटो) प्रवृत्ति निर्धारण गर्न। यो समय को एक लामो अवधिको Highs र मूल्यहरू को lows औसत मूल्य पर्न जान्छ। तल - लाइन उकालो निर्देशित गरिएको छ भने, प्रवृत्ति अप, तल छ। लाइन को समानान्तर व्यवस्था फ्लैट संकेत गर्छ।
Kindzhun-Seine - यो चार्ट मा पूर्वनिर्धारित सेटिङ छ, जो मुख्य लाइन, नीलो छ। यो दीर्घकालीन प्रवृत्ति लाइन, को 26 समय फ्रेम को आधार मा गणना गरिएको छ जो। व्याख्या लाइन समान Tenkan-Seine।
Senkou spen-एक - Kindzhun-सेन र Tenkan-सेन बीच बीचमा छ। यो दोस्रो पटक अन्तराल को आकार मा अगाडी सारे छ। यो चार्ट बालुवा रंग मा संकेत गरिएको छ।
Senkou spen-बी - तेस्रो समय अन्तराल को मूल्य औसत पढाइ छ। यो दोस्रो पटक अन्तराल को मात्रा तिर सारे छ। ग्राफ मा एक फिक्का बैजनी रंग छ।
चिको-spen जसमा वर्तमान बार बन्द मूल्य देखाउँछ। लाइन दोस्रो समय अन्तराल को राशि द्वारा सारे। ग्राफ मा एक हल्का हरियो रंग छ।
वितरण को मापदण्डहरु
Senkou स्प्यान एक र Senkou स्प्यान बी बादल को रंग परिवर्तन निर्देशन को चौराहे मा निर्भर: Ichimoku क्लाउड दुई लाइनको इन्टरसेक्ट द्वारा गठन गरिएको छ। मूल्य बादल ग्राफ माथि जान्छ, यो एक उकालो आन्दोलन देखाउँछ। तल को आन्दोलन - बादल तलको मूल्य भने। ग्राफ बादल मा superimposed हुन्छ, बजार मा तपाईं फ्लैट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो समयमा, व्यापार उच्च जोखिम सँगसँगै छ।
9, 26 र 50. उहाँले निम्न मापदण्डहरु द्वारा निर्देशित थियो: सूचक को निर्माता निम्न सेटिङहरू सेट।
एक दैनिक चार्ट लागि:
9 - यो डेढ काम सप्ताह छ;
26 - महिनाको श्रम दिन को संख्या;
52 - एक वर्ष सप्ताह को संख्या।
साप्ताहिक चार्ट लागि:
9 सप्ताह - यो2महिना छ;
26 हप्ता - छ महिना छ;
52 हप्ता - एक वर्ष।
संकेत सूचक लाइन र समापन मूल्यहरु को लाइन क्रस घटनाको उत्पन्न भएको छ। माथिको मात्र साधारण मापदण्डहरू सेटिङ हो। सूचक विशिष्ट रणनीति व्यक्तिगत मिलाइएको लागि स्वीकार्य छ। पूर्णता कुनै पनि व्यापार साधन ल्याउन खतरा छ जो एक व्यापारी को हात मा, यो सिस्टम राम्रो परिणाम देखाउन सक्छौं।
Ichimoku सूचक मानक सेटिङहरू संग बजार अवस्थाको विश्लेषण लागि प्रभावकारी हुन्छ। केही अनुप्रयोग tredery अभ्यास प्यारामिटरहरू halving: 5, 13 र 26।
व्यावसायिक व्यापारीहरु अन्य सेटिङहरू को एक नम्बर को प्रयोग सिफारिस:
15 मिनेट चार्ट, 30 मिनेट र समय को लागि: 15, 60 र 120।
को प्रतिघण्टा चार्ट, र4घण्टे 12, 24 र 120 को लागि।
dnevki लागि: 9, 26 र 52।
दीर्घकालीन अभ्यास द्वारा प्रदर्शन को रूप मा, व्यापार प्रणाली Ichimoku अधिक एक दिन समयसीमाको द्वारा लाभकारी maximizes। यो व्यापार प्रणाली को सार परिवर्तन रूपमा Newcomers, Ishamoku सेटिङहरू परिवर्तन हुँदैन गर्न र यसको प्रभावकारिता कम हुन सक्छ।
खोल्न मुख्य संकेत
लोकप्रिय Ichimoku रणनीति मूल्य एक चलिरहेका बजार मा Senkou-spen हद पार गर्दा खोल्ने स्थिति को लागि प्रदान गर्दछ। जब अप-डाउन संकेत बिक्री को लागि आपूर्ति गरिएको छ। एक खरीद संकेत - विपरीत दिशा मा। मूल्य बादल छोड्दा संकेत प्रवर्धन ठाउँ लिन्छ।
फ्लैट समयमा, बादल एक पर्याप्त ठूलो चौडाइ, एक खरीद संकेत क्लाउड तल्लो सीमा मा उकालो दिशा मा Kindzhun-सेन लाइन Tenkan सेन्ट लाइनमा को चौराहे मा आएको। उल्टो अवस्था - यो बेच्न एक संकेत हो।
Ishamoku सूचक लाइन समर्थन र प्रतिरोध रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। rebound र माध्यम तोड्न धेरै सान्दर्भिक खुला स्थितिहरू विचार। प्रभावकारी को एक सूचक को संयोजन छ कैंडलस्टिक विश्लेषण। यस्तो पिन-पट्टी रूपमा, गठन गरिएको छ अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रवृत्ति ढाँचा को लाइनहरु को चौराहे मा भने, वा मैनबत्ती अवशोषण देखिन्छ, अनुसार संग खोल्न सकिन्छ व्यापार को नियम को कैंडलस्टिक विश्लेषण मा।
दीर्घकालीन प्रवृत्ति को गठन
Ichimoku व्यापार प्रणाली तपाईं बलियो प्रवृत्ति आन्दोलन को शुरुवात परिभाषित गर्न अनुमति दिन्छ। दीर्घकालीन जहाँ एक अवस्थामा प्रवृत्ति रेखा र अल्पकालीन प्रत्येक अन्य र Senkou-Spen निर्देशन गर्न समानान्तर हुनेछ, यो एउटा बलियो र चिरकालीन आन्दोलन गठन गर्न एक संकेत हुनेछ। तपाईं राम्ररी स्थापित प्रवृत्ति संग लाइनहरु को एक फिर्ता रोल गर्दा स्थिति माथि topped गर्न सकिन्छ। Kijun-सेन, र तल Senkou-Spen - एक uptrend, माथि स्थिति, लाइन Tenkan-सेन पकड केन्द्र छ। जब मूल्य को तलतिर आन्दोलन, माथि र तल लाइनहरु को स्थान मिरर गर्न। व्यापारीहरु भाषामा दुई प्रवृत्ति लाइनको इन्टरसेक्ट "स्वर्ण क्रस" भनिन्छ। यो प्रमुख बजार खेलाडीहरू व्यापार समयमा अभ्यास कि बलियो संकेत को छ।
व्यापारिक प्रणालीको लागि आधारमा Ichimoku
Ichimoku क्लाउड बजार मा प्रमुख खेलाडीहरू द्वारा कथित छ धेरै अस्पष्ट छ। प्रशंसकको नै नम्बर भइरहेको उपकरण प्रचलनमा विरोधीहरूले अफसेट। शुद्ध रूप मा, उपकरण कहीं दायरामा (30-40%) मा, मुनाफा एक ठूलो प्रतिशत ल्याउन छैन। मुद्रा जोडी लागि आधारभूत संकेत 3-4 भन्दा बढी पटक एक महिना, दुर्लभ छैन।
एक आधार सूचक रूपमा प्रयोग भने अन्य सूचकहरू संकेतहरू यसलाई पूरक र PriceAction प्रयोग, तपाईं राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्यापार को स्तर द्वारा प्रणाली पूरक गर्न उपयोगी छ। र अन्तमा। अन्य कुनै पनि उपकरण जस्तै, यो प्रवृत्ति संग Ichimoku व्यापार आवश्यक छ। बजार विरुद्ध जाँदै छैन मात्र जोखिमपूर्ण छ, यो निक्षेप हानि संग fraught छ। फलस्वरूप, प्रवृत्ति विपरीत पुग्नु जो संकेत, उपेक्षा गर्नुपर्छ। यो रणनीति पनि व्यापार अनुमति बाँकी आदेश। गुमेको ट्रेडों को संख्या समग्र मदत गर्नेछ कम मौलिक विश्लेषण। ब्याज दर ट्र्याक, केन्द्रीय बैंकहरू को टाउको द्वारा नीति कथन averaging को परिचय, यो सम्भव एक प्रवृत्ति सहनुपरेको गर्न प्रतिक्रिया छ।
फाइदा र प्रणालीको बेफाइदा
रणनीति को मुख्य लाभ अप बजार को राज्य निर्धारण मैनबत्ती गर्न को संभावना छ: फ्लैट वा प्रवृत्ति। सत्यता र ग्राफ को दृश्य धारणा तपाईं आन्दोलन को एक महत्वपूर्ण भाग "बन्द क्षति" गर्न अनुमति दिन्छ। लाइनहरु को रेखांकन नयाँ चुचुराहरूको को उपस्थिति गर्न प्रतिक्रिया धेरै छिटो हो। तिनीहरूले औसत सार्दा जस्तै LAG गर्छन छैन। उपकरण मात्र बेफाइदा पनि Ichimoku क्लाउड एउटा सानो (साँघुरो) यदि भन्ने तथ्यलाई मा निहित छ, को संकेत को कुनै पनि नेभिगेट आवश्यक छैन। यस्तो अवस्थामा, प्रणाली नराम्ररी पूरा गर्नुहुन्छ।
अनुभवी व्यापारीहरु को सिफारिस
Ichimoku रणनीति राम्रो मूल्य लाभ र घाटा दिनुभयो, तपाईं स्पष्ट अनुभवी बजार सहभागी आधारभूत निर्देशन पालना गर्न आवश्यक:
प्राविधिक स्टप अर्डर दायरा मा मुद्रा जोडी आधारमा, 15 अंक देखि 80 सेट गर्नुपर्छ। यूरो र डलर भन्दा राम्रो स्टप 15 30 अंक को दायरा छ भने, पाउन्ड यो 30 र 80 अंक बीच भिन्न गर्नुपर्छ। यो नियम सानो समयसीमाको लागि साँचो छ। व्यापार दिन वा साप्ताहिक चार्ट मा बाहिर छ भने, स्टप अर्डर तेस्रो वा चौथो स्तर भित्र सेट गरिएको छ। यो 200 अंक पुग्न सक्दैन।
सूचक कारोबार खुला बलियो स्तर मा निर्माण, आवश्यक। नजिक छ कि विकल्प विचार, बादल र मूल्य स्तर बीच चयन गर्नुपर्छ।
को रोक आदेश को परिमाण उद्देश्य र TIMEFRAME निर्भर हुनेछ। लाभ र हानि को सिफारिश अनुपात51 हुनुपर्छ।
तपाईं प्रवृत्ति संग व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ भने, स्टप अर्डर ट्रिगरिङ को सम्भावना मात्र 20% छ। जब काउन्टर प्रवृत्ति व्यापार संभावना shlopotat "moose" 80% छ।
कुनै पनि परिस्थितिमा रोक्न बादल भित्र हुनु हुँदैन। को भ्क्याड़ कार्यशाला धन कारण, यो एक अनुचित स्थिति रहेको, सजिलै clatter गर्न सक्नुहुन्छ। को खुट्टा को न्यूनतम आकार बादल बाहिर देखि5अंक हुनुपर्छ।
को "विदेशी मुद्रा" मुद्रा बजार मा व्यापार मा Ichimoku को प्रभावकारिता यो उपकरण स्वेच्छाले मुद्रा जोडी को आन्दोलन भविष्यवाणी गर्न केन्द्र व्यवहार विश्लेषकहरूले प्रयोग भन्ने तथ्यलाई पुष्टि भएको छ। यो सिस्टम लागि पूर्वानुमान दीर्घकालीन संभावनाहरु मा छन्। खुला popping र एक दिन भित्र कारोबार बन्द पूर्ण अस्वीकार्य छ। प्रभावकारी व्यापार स्थान को लागि एक हप्ता वा अझ राख्न छन्। उपकरण भावना रोक्न सक्षम र पैसा व्यवस्थापन को नियम बारे गम्भीर छ जो एक व्यापारी को हात मा हुनेछ। शुरुआती सुरु यो उपकरणको बजार विश्लेषण संग आवश्यक छैन, तपाईं एक सरलीकृत कार्यात्मक किनमेल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
Royalmaxbrokers: अमेरिका makrostatistiki बावजुद बढ्छ
गुगल ग्लास चश्मा संग अब इन्टरनेटमा घण्टा खर्च गर्न आवश्यक छ।
लेख आफ्नो हातमा पास्ता को गरे। बच्चाहरु र वयस्क लागि रमाइलो
चड्डी जुत्ता संग पहना गर्छन्?
वोरोनिश, सफारी पार्क "लाल रंग Yar": वर्णन, जनावर, रोचक तथ्य र समीक्षा